Inta lagu guda jiro Daaweynta - Hospital Shijiazhuang Yiling
Email / Computers. Waxaa jira xiriir internet qol kasta oo isbitaalka. Halkan ayaad keeni kartaa computer.
TV / Air-conditioner. TV, Air-conditioner yihiin alaabta guriga qol kasta oo bukaanka.
Qoyska ama asxaabta Services. Waxaan bixinaa sariir kale ee qoyska ama asxaabta ee bukaanka. Haddii aad la socda in ka badan hal saaxiib, waxaan kaa caawin qol hotel buug loogu talagalay adiga.
Hotels ama dukaamada ama park. Waxaa jira dukaamada badan oo waaweyn iyo hotels dhow. A park biyo badan oo waa ag isbitaalka, haddii aad u baahan tahay la soco ama dukaan, turjumaanada our aad tilmaan noqon doonaa.
Adeegyada Banking. ATM waxaa laga heli karaa hareeraha Isbitaalka. Raadi goobaha ATM.